Imibuzo evame ukubuzwa | I-ANHUI TANGRUI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CO., LTD
1. Uyini umkhakha wakho omkhulu wokufaka isicelo? Izimoto eziguquliwe noma izimoto ezingekho emphakathini?
Izinhlelo zokuqondisa izinto nokumiswa kwazo zombili izimoto eziguquliwe nezizimele
2. Noma yisiphi isiqu noma isitifiketi? Kanye nezinsizakusebenza eziyinhloko namathuluzi wokuhlola?
Isitifiketi: IATF16949 Isisetshenziswa sokuhlola: i-trilinear ixhumanisa ithuluzi lokulinganisa, i-X-RAY, IGENERTATORS, umtshina we-Metallographic, i-spectrograph nokunye. Izinhlobo ezingaphezu kwemi-20 zemikhiqizo ingaba yi-R & D ngenyanga.
3.Yini indlela yakho yokukhokha?
TT, Ku-usd / euro, usuku lwesikweletu lungasekelwa ngemuva kokubambisana kwezinyanga eziyi-6
4. Iyini indlela yakho yokupakisha ejwayelekile?
I-ctn yokhuni, isikhwama se-opp sangaphakathi, ngaphandle kwe-pallet., I-OEM ne-ODM iyatholakala.
1. Iyini inqubomgomo yakho yesiqinisekiso?
I-Tangrui inikeza amawaranti ahola phambili embonini kuyo yonke imikhiqizo kufaka phakathi i-Lifetime Replacement Warranty kuzinhlelo eziningi zokuqondisa kanye nezingxenye ezikhishwe ku-Suspension.
2. Iyini inqubomgomo yakho yokubuyisa?
Inqubomgomo yokubuyisa kaTangrui ingabukwa lapha.uma unemibuzo sicela usishayele ku-0086-553-2590369
1. Kungani uthenga iTangrui Products? Imikhiqizo yakho eyinhloko? Yiziphi izimakethe ezinkulu namakhasimende owasebenzelayo?
I-Tangrui ekhethekile ngohlelo lokuqondisa nokumiswa iminyaka engaphezu kwengu-20, sisebenzise iToyota, Honda, Kia, Nissan, Ford, Buick, Chevrolet, Renault, Geely, Chery, BYD kanye nokunye. , ibhola elihlangene, ihabhu lesondo.
Imakethe enkulu: eNyakatho Melika
2. Uyini uMoq wemikhiqizo yakho emisha?
Amasethi angama-300, uma ngabe kukhona impahla, akunamkhawulo.
3. Ungayithenga kanjani into yakho yesitoko?
Thumela i-oda lakho ngqo.
1. Uthunyelwa kanjani i-oda lami (ngubani)?
Ama-oda ethu athunyelwa ngumdluliseli wakho omisiwe, ama-oda wakho azothunyelwa njengesicelo sakho.
2. Ngingayilandela kanjani i-oda lami?
Ungakwazi ukulandelela i-oda lakho nomphathi we-akhawunti yethu, imininingwane yokulandelela izovuselelwa kaningi.
3. Ngazi kanjani ukuthi ama-oda wami athunyelwe?
Lapho i-oda lakho lithunyelwa uzothola i-imeyili yokuqinisekisa ukuthunyelwa, ethunyelwe ku-emai oyifakile lapho ufaka i-oda lakho.Ungase futhi ubuke lesi statu ngomkhombe wethu we-aoocunt.
4. Ngithatha isikhathi esingakanani uku-oda kwami ​​ukufika kimi?
Isikhathi esivulekile sesikhunta se-icluding, imali yokubumba nokunye njll Isikhathi esisha esivulekile sesikhunta izinsuku ezingama-40-60, isikhathi sokukhiqiza ngobuningi izinsuku ezingama-35-45, isikhathi sokuthumela izinsuku ezingama-30-45.
1. Ungaba kanjani i-ejenti yakho ekhethekile?
Kusebenze kakhulu izinyanga eziyisithupha, abasabalalisi abangochwepheshe noma abathengisa izingxenye zezimoto emakethe yangakini.
Iqhubu langaphambili Lokuqondisa, Ihabhu Lesondo, I-Rubber ye-Shock Absorber, Isifaki seHood Shock, ITire Ball Joint, I-Bolt Shock Absorber,